ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ပုံစံအဆန်းလေးနဲ့ ၀တ်စားထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင် – Cele Top Stars
January 17, 2022 By admin2Knowledge
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အကယျဒမီ စိုးပွညျ့သဇငျကတော့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့အသညျးကိုခွှထေားသူလေး ဖွဈပါတယျနျော. သူမကတော့ အသကျငယျငယျရှယျလေးမှာပဲ အဈမကွီး စိုးမွတျသူဇာနဲ့အတူ ဝငျရောကျလာသူလေးဖွဈပွီးညီအဈမတှနေဲ့အတူ ” မငျးသမီး” ပိုးထညျတိုကျကိုတညျထောငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ ဇာတျလမျးတှမှောလညျး ကရြာနရောကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျနိုငျသူဖွဈပွီး သူမခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးနဲ့လညျး အဆကျအသှယျမပွတျစဘေဲ ပုံလေးတှတေငျပေးနသေူ ဖွဈပါတယျနျော.. သူမကတော့ မကွာခငျရကျပိုငျးတုနျးက ကိတျမုနျ့သငျတနျးတကျနတေယျဆိုပွီးတော့ ဝမြှေပေးလာပါသေးတယျ။
ဒီနလေ့ေးမှာလညျး စိုးပွညျ့က ပရိသတျတှေ မမွငျဖူးသေးတဲ့ အရငျခတျေက ပုံစံလေးနဲ့ဝတျစားဆငျယငျပွီး တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော. အသကျရှယျငယျရှယျပမေဲ့ ခုလိုမြိုး ပွငျဆငျထားတာ လှတယျဆိုပွီေးတာ့ ခဈြစရာကောမနျ့လေးတှလေညျး ရေးသားထားကွပါသေးတယျ။ စိုးပွညျ့ကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပုံစံအဆနျးလေးနဲ့ လှနတေဲ့ စိုးပွညျ့ကို အရငျကထကျပိုပွီး ခဈြပေးကွပါအုံးနျော..
Source: Soe Pyae Tah ZIn
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီ စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကိုခြွေထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်. သူမကတော့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်လေးမှာပဲ အစ်မကြီး စိုးမြတ်သူဇာနဲ့အတူ ဝင်ရောက်လာသူလေးဖြစ်ပြီးညီအစ်မတွေနဲ့အတူ ” မင်းသမီး” ပိုးထည်တိုက်ကိုတည်ထောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီး သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဘဲ ပုံလေးတွေတင်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမကတော့ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်းက ကိတ်မုန့်သင်တန်းတက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ဝေမျှပေးလာပါသေးတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာလည်း စိုးပြည့်က ပရိသတ်တွေ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ အရင်ခေတ်က ပုံစံလေးနဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်. အသက်ရွယ်ငယ်ရွယ်ပေမဲ့ ခုလိုမျိုး ပြင်ဆင်ထားတာ လှတယ်ဆိုပြီေးတာ့ ချစ်စရာကောမန့်လေးတွေလည်း ရေးသားထားကြပါသေးတယ်။ စိုးပြည့်ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပုံစံအဆန်းလေးနဲ့ လှနေတဲ့ စိုးပြည့်ကို အရင်ကထက်ပိုပြီး ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်..
အာမခံကောင်းလို့ သူမစိုက်လျော်လိုက်ရတဲ့ သိန်း(၂၀၀၀)ကျော်ကို ပြန်လာပေးအောင် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ အကူညီတောင်းလာတဲ့ သိင်္ဂီထွန်း